मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ढाकामा कस्तो छ नेपालको तयारी ? - २४ कार्तिक २०७७, NepalTimes
मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ढाकामा कस्तो छ नेपालको तयारी ?
आगामी शुक्रबार हुने मैत्रिपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बंगलादेशको ढाकामा तयारीलाई तिव्रता दिएको छ । दुई मैत्रिपूर्ण खेलका लागि गत बिहीबार बंगलादेशको ढाका पुगेको नेपालीले टोलीले केही दिन यता बंगलादेशमा रहेर फुटबलमा फर्किन लागेको हो ।
करिब नौ महिना पछि फर्किन लागेको फुटबल खेल अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार पहिलो खेल खेल्न लागेको हो । त्यसका लागि खेलाडी निकै उत्साहित देखिएका छन् । काठमाडौंको एक साता अभ्यास पछि थप एक साता बंगलादेशमा अभ्यास गर्ने योजना सहित नेपालबाट उडेको टोलीले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भने तिहारको भोलिपल्ट अर्थात मंसिर २ गते खेल्ने तालिका रहेको छ । खेलमा फर्किँदा उत्साहित भएका खेलाडीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सुखद नतिजा ल्याउने लक्ष्यका साथ अभ्यासमा मिहिनेत गरिरहेका हुन् ।
प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले पनि खेलाडीमा फिटनेस सुधार हुँदै गएको र बंगलादेशसँगको खेलमा राम्रो नतिजा ल्याउनमा आशावादी रहेको यस अघि बताइसकेका छन् । बंगलादेशको ढाकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आइतबार मैदानमा दुई घण्टा प्रशिक्षण गरेको थियो । नेपाली फुटबल टोली कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिमका कारण बिहीबारदेखि ढाकामा होटेल क्वारेन्टाइनमा बसेको थियो ।
क्वारेन्टिनमा रहेको टोलीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रशिक्षणका लागि मैदानका फर्किएको हो । बंगलादेशसँग कात्तिक २८ र मंसिर २ गते बंगबन्धु रंगशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ४ः४५ बजे हुने तालिका छ ।